June 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
Maxkamada rafcaanka gobolka Nugaal oo ayiday xukunka dilka ah ee saddex nin oo loo haysto kufsiga iyo dilka Caasho Ilyaas Aadan
June 30, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada rafcaanka gobolka Nugaal ayaa maanta oo Axad ah ayiday xukunka dilka ah ee saddex nin kuwaasoo kufsaday dilayna gabar 12-sanno jir ah. Saddexna nin ayaa bishii May waxaa dil toogasho ah ku […]
Waa kuma taliyaha cusub ee ciidamada Darawiishta Puntland?
June 29, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa u magacaabay Janaraal Yaasiin Cumar Dheere taliyaha cusub ee ciidamada Daraawiishta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Taariikh kooban Janaraal Yaasiin […]
Madaxweynaha Puntland oo taliye cusub u magacaabay ciidamada Daraawiishta
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa u magacaabay Yaasiin Cumar Dheere taliyaha cusub ee ciidamada Daraawiishta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Taliyihii ka horeeyay Cabdishukri Cabdullaahi […]
Somalia Moves Step Closer to Reviving Oil Sector With New Terms
June 28, 2019 Puntland Mirror 0
Somalia’s oil ministry has moved a step closer to alleviating more than two decades of oil-sector paralysis. The country’s new petroleum Revenue Sharing Agreement, or RSA, relates to Somalia’s petroleum law, which was approved last […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee maxkamada sare ee dowladda Puntland Yuusuf Xaaji Nuur ayaa maanta oo Jimce ah lagu aasay qabuuro kuyaala duleedka magaalada Garoowe, kadib aas qaran oo loo sameeyay. Aaska qaran ayaa waxaa […]
Taliyeyaal ciidan oo dhawaan kasoo gootay maamulka Somaliland oo yimid magaalada Garoowe
June 27, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyeyaal ciidan oo dhawaan kasoo gootay maamulka Somaliland ayaa maanta oo Khamiis ah soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland. Taliyeyaasha ayaa duleedka magaalada waxaa ku soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan haayadaha dowladda […]
Guddiga doorashooyinka Puntland oo is-casilay
Garoowe-(Punland Mirror) Guddiga doorashooyinka Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan TPEC ayaa maanta oo Khamiis ah is-casilay. War-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay isku casileen kadib markii xubno katirsan […]
June 26, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Arbaco ah u safary dalka Januuti. Shir jaraaid oo uu qabtay kahor inta uusan duulin ayuu ku sheegay in safarkiisa Jabuuti ujeedkiisu […]
Agaasimaha madaxtooyada DFS oo sheegay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo lala yeelan lahaa Somaliland
June 25, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeysay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo la sheegay in ay la yeelan lahayd maamulka Somaliland oo la qorsheeyay in ay ka dhacaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qoraal […]
Raysulwasaare Khayre oo tagay Dhuusamareeb iyadoo uu sii kordhayo khilaafka ka dhex jira Galmudug
June 24, 2019 Puntland Mirror 0
Dhuusmareeb-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta oo Isniin ah tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo uu sii kordhayo khilaafka ka dhex jira maamulka Galmudug. Raysulwasaaraha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha […]
Puntland oo si rasmi ah u furtay nidaamka xisbiyada badan
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah u furtay nidaamka xisbiyada badan. Munaasabada daahfurka ayaa ka dhacday xarunta PDRC ee kutaala caasimada Puntland ee Garoowe, waxaana ka qaybgalay madaxweynaha Puntland [...]
Muqdisho-(Pountland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Duqeynta ayaa Khamiistii ka dhacday meel qiyaastii 74 mayl dhanka waqooyi-galbeed ka xigta Muqdisho, sida Taliska [...]
Shirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka furmay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya hoggaamiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Raysulwasaare Xasan [...]